Caafimaadka Prince Philip: Amiir William wuxuu tixgelinayaa xaaladda aabihiis - teles relay
Caafimaadka Prince Philip: Amiir William wuxuu qiimeynayaa xaaladda awowgiis
Prince Philip inuu 'fuulo gidaarada' isbitaalka, qof u dhuun daloola ayaa leh
Isdiiwaangeli GRATUIT hadda oo marna ha seegin sheekooyinka boqortooyada ugu fiican mar dambe.
Emayl aan ansax ahayn
Markaad isqorto, waxaan u isticmaali doonaa macluumaadka aad bixiso inaan kuugu soo dirno joornaaladaan.
Mararka qaarkood waxay ku daraan talooyin ku saabsan joornaalada kale ama adeegyada la xiriira ee aan bixinno.
Notre Ogeysiiska Asturnaanta wuxuu sharxayaa sida aan u isticmaalno xogtaada iyo xuquuqdaada.
Waad ka bixi kartaa wakhti kasta.
Prince William la siiyay taageerayaasha boqortooyada ee ka walwalsan Prince Philipcaafimaadka leh cusbooneysiin Duke of Cambridge ayaa saaka booqday xarun talaal oo kutaala King's Lynn Corn Exchange ee Norfolk.
Hawlgalkiisii ​​ugu horreeyay ee ka baxsan hoygiisa Sandringham sannadkan, Amiir William wuxuu kala hadlay shaqaalaha NHS iyo mutadawiciin khibradooda ah inay qayb ka yihiin barnaamijka tallaalka ugu weyn taariikhda Ingiriiska.
Halkaas, sawir-qaade ruug-caddaa ah oo boqortooyo ah Arthur Edwards ayaa weydiiyey sida ay wax u socdaan Duke of Edinburgh, oo Isbitaal la dhigay Talaadadii la soo dhaafay.
Intii uu indha indhayeynayay, ayuu Amiir William ku jawaabay oo yidhi, "Haa, wuu fiicanyahay - isaga ayaa isha ku haya". "
Toddobaadkii la soo dhaafay Buckingham Palace ayaa shaaca ka qaaday in Duke of Edinburgh la geeyay Isbitaalka King Edward VII isaga oo la tashanaya dhakhtarkiisa.
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Amiir William wuxuu ka hadlay awowgiis intii lagu jiray ka qayb qaadashada boqortooyada (Sawirka: GETTY)
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Taageerayaasha Royal waxay ka tagayaan kaararka iyo buufinta Duke ee cusbitaalka bannaanka (Sawirka: GETTY)
Qasriga ayaa lagu yiri war-murtiyeedka: “Sarreeyehiisa Boqorka Duke of Edinburgh waxaa la dhigay isbitaalka King Edward VII Hospital ee London fiidnimadii Talaadada.
"Ogolaanshaha Duke waa tallaabo taxaddar leh, oo uu kula taliyay dhakhtarka His Royal Highness, ka dib xanuun.
"Duke-ku waa inuu ku sugnaado cisbitaalka dhawr maalmood oo kormeer iyo nasasho ah."
AKHRI MARKA HORE: 'Qashinka ay tuureen' John Humphrys ayaa si kulul u weeraray Harry iyo Meghan
Cusbooneysiinta caafimaadka Prince Philip: Duke of Cambridge markii ugu horreysay ee weji-ka-waji uu ka qeyb galo sanadka (Sawirka: PA)
Safarka Amiir Philip ee isbitaalka ma aheyn mid deg deg ah oo la seexdo, ilo wareedyo ka tirsan boqortooyada ayaa sheegay, iyagoo intaa ku daray in dhaqtarka uu si taxaddar leh u shaqeynayo.
Buckingham Palace ma aysan soo saarin wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan caafimaadka Duke tan iyo Arbacadii la soo dhaafay, laakiin ilaha boqortooyada ayaa sii wadaya inay tilmaamaan Prince Philip inuu ku jiro 'niyad wanaagsan'.
Nin xog ogaal ah ayaa yiri jimcihii: "Markuu arkay dhakhtarkiisa, Duke of Edinburgh waxaa lafilayaa inuu kusii jiro cisbitaalka si uu ugu kuurgalo una nasto dhamaadka usbuuca iyo usbuuca dambe."
Amiir Harry wuxuu ugu yeeray Boqoradda wadahadal deg deg ah [Aragti]
Amiir Filib wuxuu noqday "boqor aad u wanaagsan" ka hor inta uusan noqon wadani [WARBIXIN]
Prince Philip 'wuu ka tagay' Harry iyo Meghan Megxit kadib [KHABIIRNIMADA]
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Amiir William wuxuu ka maqlay shaqaalaha NHS-ta Norfolk (Sawirka: PA)
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Amiir Philip iyo boqoradda ayaa laga tallaalay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' (Sawirka: GETTY)
Si kastaba ha noqotee, kormeerayaasha boqortooyada ayaa ka walwalsanaa caafimaadka Prince Philip Sabtidii, markii Amiir Charles u safray London kana yimid Gloucestershire si uu ugu booqdo isbitaalka.
Amiirka Wales, Boqoradda iyo wiilka ugu weyn ee Philip, ayaa ku qaatay 30 daqiiqo isbitaalka ka hor inta uusan ku laaban Highgrove, halkaas oo uu la joogo Camilla, Duchess of Cornwall.
Sababtoo ah faafida joogtada ah, booqdayaasha waxaa loo oggol yahay oo keliya isbitaalada gudahooda "xaalado aan caadi ahayn".
In kasta oo Buckingham Palace uusan shaaca ka qaadin cudurka uu Duke of Edinburgh dareemay inuu yahay mid aan fiicnayn, haddana ilo wareedyo ayaa sheegay inuusan qabin cudurka loo yaqaan 'coronavirus'.
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Amiir Philip wuxuu guursaday boqoradda 1947 (Image: EXPRESS)
Duke of Edinburgh iyo Boqoradda waxay heleen tallaalkoodii ugu horreeyay ee COVID-19 bishii Janaayo.
Maalmo ka dib markii boqorka uu qaatay go’aanka aan caadiga ahayn ee uu kaga hadlayo arimahan caafimaad ee gaarka ah, Amiir William wuxuu sheegay inuu ku faano ayeeyadiis iyo ayeeyadiis helitaanka dharbaaxada.
Wicitaan uu la sameeyay shaqaalaha safka hore, Duke of Cambridge wuxuu yiri: “Ayeeyaday iyo ayeeyaday waxay heleen talaalka waana ku faraxsanahay iyaga markaan sameeyay.
“Runtii waa muhiim in qof kastaa helo tallaalkiisa. "
Cusboonaysiinta caafimaadka Prince Philip: Amiir William wuxuu sheegay inuu heli doono tallaalka COVID-19 (Sawirka: PA)
Prince Philip, oo 100 jirsanaya 10-ka Juun, iyo Boqoradda, oo 94 jir ah, ayaa lagu soo daray mid ka mid ah qaybaha loo arko inay ugu nugul yihiin cudurka loo yaqaan 'coronavirus'.
Prince Charles iyo Camilla, oo labaduba ka weyn 70, ayaa sidoo kale la tallaalay bartamihii Febraayo.
Intii lagu guda jiray booqashadii saaka, Amiir William wuxuu sheegay inuu sugayo markiisa tallaalka iyadoo la raacayo tilmaamaha dowladda ee ku saabsan keenista.
Iyo, markii wakhtigu yimaado, wuxuu joogi doonaa xagga sare ee safka si loogu khiyaaneeyo inuu dadka u tuso sida ay u fududahay in la sameeyo.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore (Ingiriis) https://www.express.co.uk/news/royal/1401018/Prince-Philip-health-update-Prince-William-Duke-of-Edinburgh-hospital-stay -latest
Belgium: Coronavirus: Milkiilayaasha degenaanshaha labaad ee dibada waxay u jeestaan ​​Golaha Dowlada
Shy'm: waa maxay magaciisa dhabta ah?